AHRN – Waikhar clinic Opening – AHRN-Myanmar
AHRN – Waikhar clinic Opening
By albert wilson — In Uncategorized	— 09/06/2020
AHRN – ဝှေခါ (နားခိုရာ) ဆေးခန်း ဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်ခြင်း
ကချင်ပြည်နယ်၊ဖားကန့်မြို့နယ်၊ဝှေခါဒေသအတွင်းရှိ မူးယစ်ဆေးသုံးစွဲ သူများ၊ ၄င်းတို့မိသားစုဝင်များ၊ လိင်အလုပ်သမများ၊ လူငယ်များနှင့် ပြည် သူလူထုများတွင် မူးယစ်ဆေးစွဲနှင့်ဆက်နွယ်သော အန္တရာယ်လျော့ချရေး လုပ်ငန်းများအပါအဝင် ထိရောက်သော ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုများ ပေး နိုင်ရန်ရည်ရွယ်၍ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊မေလ (၂၀) ရက်နေ့တွင် ဝှေခါကျေးရွာ၌ AHRN-နားခိုရာဆေးခန်း ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ တစ်ကမ္ဘာလုံးတွင် ပြန့်နှံ့ဖြစ် ပွားလျက်ရှိသော ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါသည် စိတ်ဝင်စားခံရမှု အမြင့်ဆုံးဖြစ် နေသည့်အချိန်တွင် အခြား တစ်ဖက်တွင်လျစ်လျူရှု၍မရသော အိပ်ချ် အိုင်ဗွီ၊ တီဘီရောဂါ၊ ဆေးလွန်မှု အစရှိသည့် ကျန်းမာရေးပြဿနာများ သည်လည်း အထိခိုက်လွယ်ဆုံး (Vulnerable) အုပ်စုဖြစ်သည့် မူးယစ် ဆေးသုံးစွဲသူများ၊ လိင်အလုပ်သမများ၊ ၄င်းတို့ မိသားစုဝင်များ၊ လူငယ် များတွင် အများဆုံးဖြစ်နေပါသည်။ အလိုအပ်ဆုံးသောလူများထံသို့ လို အပ်သော ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှု လက်လှမ်းမှီရရှိစေနိုင်ရန် ရည်ရွယ် ချက်ဖြင့်ဆေးခန်းဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။AHRN – ဝှေခါ နားခိုရာဆေးခန်း ကို Access To Health Fund ရံပုံငွေအဖွဲ့မှ ပံ့ပိုးကူညီ ပါသည်။
AHRN – Hwaykhar clinic Opening
We are happy to announce that the AHRN – Hwaykhar clinic opened on 20th May 2020 to provide comprehensive harm reduction services as well as primary health care to people who use drugs, their partners, sex workers, youth, and the community members in the Hwaykhar-Hpakant township. Currently, the COVID-19, as pandemic rightly so receivealot of attention worldwide, however, now more than ever it is critical to respond to health problems such as HIV, TB, drug overdose among the people who use drugs and their partners, sex workers and youth. The clinic is opened to ensure that those most vulnerable populations have access to most needed prevention, treatment, and care services.AHRN- Hwaykhar project is funded by Access to Health Fund.